WallGen: amar si loo abuuro sawirro | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Naqshad
WallGen waa ilo furan oo loo yaqaan 'Python utility' iyo inay diyaar u tahay inay kala shaqeyso xariiqda taliska ee GNU / Linux distro. Waxa ay sameyso ayaa abuuraya asalka desktop ama darbiyada oo leh amar fudud. Abuur asalka HQ ​​ee leh geesoolayaal iyo midabbo kala duwan. Waxay ku xasuusin doonaan waxoogaa taariikh ah oo loo adeegsaday Naqshadaynta Waxyaabaha, markaa haddii aad jeceshahay noocyada isku dhafka ah, wallgen waa aaladda aad raadineyso ...
Waxay kuxirantahay doodaha ama xulashooyinka aad u isticmaasho amarka wallgen, waxay u soo saari doontaa sawirro sawir-gacmeedka nooc ka mid ah ama mid kale, oo leh qaabab qaab-ku-saleysan, sagxaddo kala-sooc lahayn, muuqaalo sawir ku saleysan, iwm. Waa hagaag, marka aad ogaato waxa ay tahay iyo waxa ay qaban karto, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku rakibto qaybintaada qaabkan fudud iyo inay u shaqeyso wax kasta oo distro ah:
Xirmadan gudaheeda waxaad kuheleysaa dhowr qalab oo aad ku sameyso waxyaabo kala duwan, in kasta oo aan u socono meesha aan xiiseyno. KU curiyaan waraaqahaas in isticmaaleyaal badani aad u jecel yihiin. Haddii aad rabto inaad aragto lambarka isha ee qalabkan, waxaad kala tashan kartaa goobta abuuraha barta GitHub.
La sagxad derbiga ah waa fududahay:
Ikhtiyaarrada la heli karo ayaa ah –caawimaad ama -h oo u oggolaanaya helitaanka macluumaadka caawimaad ee ku saabsan amarka uu isagu ka horreeyo. The amarrada la heli karo Waxay yihiin:
sawir: isticmaal sawir halkii aad ka isticmaali lahayd wejigiisa.
poly: ku soo saar asalka asalka geesoolayaasha adoo adeegsanaya wejigooda.
qaab: wuxuu abuuraa sawir leh qaabab qurux badan.
slants - Waxay abuurtaa sawir leh khadad midabbo badan leh.
Mid kasta oo ka mid ah amarradan, calaamado badan ayaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo qaababka, midabada, qaababka, iwm. Tusaale ahaan, halkan waad tagtaa shaybaarro kala duwan sida loo isticmaalo:
Waxaan kugula talinayaa inaad sameyso imtixaano, kala duwanaansho xuduudaha oo hubi natiijada ay bixiyaan. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay waraaqahaaga cusub ee darbiga ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » WallGen: amar ku bixi sawirro
Nooca cusub ee loo yaqaan 'Proxmox Mail Gateway 6.0' ayaa la soo saaray